वेब स्क्रैपिंग के हो? शीर्ष 10 पाइजन पुस्तकालय - सेमील्ट विशेषज्ञ
वेब स्क्रैपिंग इन्टरनेटबाट जानकारी सङ्कलन गर्ने एक प्रभावकारी तरिका हो।. वेब कटाई सफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को उपयोग गरेर विश्व वाइड वेब को उपयोग गर्दछ, विभिन्न साइटहरु को डेटा एकत्र गर्दछ, र यसलाई एक पठनीय र स्केलेबल योग्य रूप मा बदलन गर्दछ।. बट डेटा संग्रह र निष्कर्षमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ. तिनीहरू अफलाइन प्रयोगका लागि केन्द्रीकृत डाटाबेसमा स्क्रैप गरिएको सामग्री बचत गर्न मद्दत गर्दछ.
वेब पेजहरु को विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाहरु जस्तै एचटीएमएल र एक्सएचएचटीएमएल को उपयोग गरेर बनाइयो. त्यसकारण, कम्पनीले मानव वेब स्क्रैपिंग प्रणालीहरू विकास गरेका छन् र डोम पार्सिङ, कम्प्यूटर भिजुअल, र प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंगमा निर्भर गर्दछ।. डेटा स्क्रैपिंग एक विज्ञापन होक र अपरिभाषी प्रविधी को लागी मानिन्छ, तर उद्यमों, प्रोग्रामरहरु, गैर कोडरहरु, वेबमास्टर्स, पत्रकारहरु, डिजिटल मार्केटर्स र फ्रीलान्सियल लेखकों को लागि उपयोगी छ.
ए वेब स्क्रैपर एपीआई हो जसले विभिन्न साइटहरूबाट जानकारी हटाउन मद्दत गर्दछ. Google र Amazon जस्ता कम्पनीहरू विभिन्न वेब स्क्रैपिंग सेवाहरू र उपकरणहरू प्रदान गर्छन्. वेब स्क्रैपिंगको नवीनतम रूप डेटा फीडहरू, RSS फीडहरू, ट्विटर फिडहरू, र ATOM फीडहरू हुन्. JSON र CSV वेब सर्भर र क्लाइन्ट बीचको यातायात भण्डारण तंत्र को रूपमा प्रयोग गरिन्छ. अक्टोपारे, आयोत. io, किमोनो ल्याब्स र पार्स हब सबैभन्दा लोकप्रिय हो (1 9) वेब स्क्रैपिंग उपकरण . तिनीहरू दुवै नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछन् र तपाईंको लागि केही कार्यहरू पूरा गर्न सक्छन्. एक पटक डाउनलोड र स्थापना गरेपछि यी यन्त्रहरूले स्याण्डे स्याण्ड पेजहरू एक घण्टामा स्क्रैप गर्न सक्छन्.
वेब स्क्रैपिंग को लागि शीर्ष 10 पायथन लाइब्रेरी:
पाइजोन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो. यसले एक गतिशील प्रणाली र स्वचालित मेमोरी व्यवस्थापन गर्दछ. पाइथोनले विभिन्न प्रोग्रामिंग पैरागर्महरू समर्थन गर्छ, जस्तै वस्तु-आधारित, कार्यात्मक, प्रक्रियात्मक र आवश्यक. यसको एक विशाल संख्यामा मानक पुस्तकालयहरू छन्, तर सबैभन्दा प्रसिद्ध पाइजोन पुस्तकालयहरू तल वर्णन गरिएका छन्.
(2 9) 1. अनुरोधहरू
अनुरोध एक पाइथन HTTP लाइब्रेरी हो जुन विभिन्न वेबसाइटहरूको अन्तरक्रियामा केन्द्रित हुन्छ।. यसले कुकीहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दछ, लग-इन सत्रहरूको ट्रयाक राख्नुहोस्, र तलका साइटहरू सङ्कलन गर्नुहोस् वा प्रतिक्रिया गर्नको लागि लामो समय लिनुहोस्. यो Apache2 इजाजतपत्रद्वारा इजाजतपत्र दिइएको छ, र अनुरोधहरूको लक्ष्य एक अनुकूल र व्यापक तरिकामा HTTP अनुरोधहरू पठाउन हो.
(2 9) 2. स्क्रैप
स्क्रैप एक वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हो जसले विभिन्न वेबसाइटहरु बाट उपयोगी जानकारी निकाल्छ।.
(2 9) 3. SQLAlchemy
SQLAlchemy एक डाटाबेस लाइब्रेरी हो जो प्रोग्रामरहरु र वेब डेवलपर्स को लागि उपयोगी छ.
(2 9) 4. सुन्दरसुप
यो एचटीएमएल र एक्सएमएल पार्सिङ लाइब्रेरी फ्रीलान्सर र वेबमास्टरहरूको लागि उपयोगी छ।.
(2 9) 5. Lxml
यो XML र एचटीएमएल कागजातहरूसँग काम गर्ने एउटा उपकरण हो. यसले XPath र CSS चयनकर्ताहरूको मूल्यांकन गर्दछ र मिलानमा मिल्ने तत्वहरू फेला पार्छ.
(2 9) 6. Pygame
यो पाइथोन लाइब्रेरीले2डी खेल विकासको कार्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ.
(2 9) 7. पिलल्ट
यो एक शक्तिशाली3डी एनीमेशन र गेम निर्माण इञ्जिन हो, जुन प्रयोगकर्ताको अनुकूल इंटरफेसको लागि प्रसिद्ध छ।.
(2 9) 8. Nltk (प्राकृतिक भाषा टुलकिट)
यसले विभिन्न तार हेरफेर गर्न मद्दत गर्छ र एक समयमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्छ।.
(2 9) 9. नाक
नाक सबै प्रोग्रामरहरु लाई दुनिया भर मा प्रयोग गरिएको पाइजोन को लागि एक परीक्षण ढाँचा हो।.
(2 9) 10. Sympy
SymPy संग, तपाइँ बहुविध कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेब सामग्रीको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ। Source .